आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी बताउँदै गठन भएका विवेकशील दलको काठमाडौं मेयरकी उम्मेद्वारको भाषण सुनिनसक्नु हुन थालेको छ । हाम्रा गाउँमा टुप्पाबाट पलाएकोलाई टुप्पिएको भन्छन् । त्यसो भन्नुको अर्थ फेद छैन, जरा छैन एकैचोटि टुप्पामा पुग्नु भन्ने अर्थ लाग्छ ।
यो विवेकशील भन्ने दल पहिला कहिल्यै सुनिएको थिएन । दलहरुले परिवर्तनका लागि त्यत्रो जनयुद्ध लडे, जनआन्दोलन गरे– यो विवेकशील कता हराएको थियो । देश संघीय गणतन्त्रात्मक घोषणा भएपछि पनि थुप्रै राजनीतिक घटनाहरु भए । विरोध र समर्थनका स्वरहरु निस्किए । तर यो विवेकशील भन्ने कहीं निस्किएन, सुनिएन । जब यो चुनाव भन्ने घोषणा भयो, विवेकशील भन्ने दल बाबुराम भट्टराईको ‘भ्यागुते सिद्धान्त’ ‘स्टायल’ मा फुत्त निस्कियो ।
अनि जब चुनावको मिति नजिकिंदै गयो, यो पार्टीले आफू निस्किए जस्तैगरी फुत्त एउटा उम्मेद्वार घोषणा ग¥यो– न सामाजिक जीवनमा कुनै योगदान भएको, न त राजनीतिमा कुनै भूमिका खेलेको ! अचम्म ! हैन यो पार्टी जसरी निस्किएको हो उम्मेद्वार पनि फुत्त निस्किने सिद्धान्तको नाम के होला हँ ? ठाड्कानेलाई जान्न मन लाइरा’च ।
अर्को कुरा ल गणतन्त्रमा पार्टी खोल्न पाइयो, चुनाव लड्न नि पाइयो । त्यो पार्टीको टिकस लिएर चुनाव लड्नेले त आफ्नो पार्टीको पक्षमा भोट हाल्न जनतालाई अनुरोध ग¥या त ठाड्कानेलाई थाहा थियो । यो विवेकशील भन्ने पार्टीका उम्मेद्वारले त अर्को पार्टीका नेताको उछित्तो काढेर भाषण मात्र गर्छन् त ! हैन राजनीति गर्नेले अलि विवेक पु¥याउनु पर्ने होइन र भन्या ?
हुन त नेपालमा बिहान–बेलुका दुई छाक टार्न मुश्किल जसलाई हुन्छ, उसको नाम धनबहादुर हुन्छ, जुन गोरुको सिङ छैन, उसको नाम तीखे भन्ने त उखानै छ क्यारे । जसले विवेक गुमाएको छ उसैको नाम चाहिं विवकेशील राख्या त्यही भएर हो कि ?